Israely : Hanukkah, Fetiben’ny Hazavàna Sy Ady Ara-Kolontsaina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Janoary 2018 6:42 GMT
Vakio amin'ny teny Português, 日本語, বাংলা, Español, Ελληνικά, English
Fety iray isan'ny tena ankamamian'ny Jiosy nandritra ny fotoana rehetra ary manana lanja ara-tantara raha resaka mifandray amin'ny lafiny ara-kolontsaiana sy ny maha-izy an-dry zareo Israeliàna ny Hanukkah, Ny Hanukkah no fahatsiarovana ny fandresen'ireo Israelita taloha ny Grika tamina ady izay niseho ny taona 165 talohan'i Jesoa Kristy. Tsy ady faritra na harena ilay ady, fa resaka ady amin'ny fahafahana; ny zo hanana fironam-pivavahana sy hanaraka ny finoana Jiosy.
Raha ny fomba amam-panao nahazatra taloha, fety Jiosy tsotsotra ihany ny Hanukkah, dia nahazo toerana mitovy amin'ny Paska izy ho toy ny fety manamarika fa Jiosy. Samy mampiseho faharetana ny Hanukkah, na ny fomba fanehoan'ny Amerikana tavaratra na ny an'i Israely, manome vahana ny fanafahana ny firenena sy ny fahalalahana ara-pinoana araka ny dika mamaritra ilay fety.” Matetika ireo raby (pretra, mpitarri-pivavahana) tsotra no manamaivana ny akony ara-tafika sy ny fitiavan-tanindrazana amin'ilay Hanukkak, ny sasany aza mihevitra mihitsy ny tantaran'ilay menaka mahagaga ho fanodinkodinana ny saina tsy ho amin'ila ady nifanaovana tamin'ireo fanjakàna nitondra ho amin'ny faharavana mahatsiravina tao Jerosalema ho lasan'ny Romana.” (loharano)
Sary eto ambony : menorah manazava, maneho ilay menaka mahagaga izay namatsy hazavàna nandritry ny andro valo tsy ankiato tao amin'ny Tempoly Jiosy
Hankalazainy any amin'ny trano marobe ny Hanukkah, any amin'ireo sehatra laika sy an'ny ara-pivavahana eny anivon'ny vahoaka Israeliana. Nisy fanadihadiana iray vao tsy ela izao no nanambara fa ny ankamaroan'ny Isreliana (83%) no mandrehitra labozia iray ny isanandro rehefa fotoanan'ny Hanukkah, tarehimarika mahavariana raha jerena ny fizarazaràna ara-poto-pinoana hita eny anatin'ny fiarahamonina. Israely, firenena ahitàna mponina maro mizàka isanandro ny vesatry ny teritery ara-pinoana, satria mijoro ho Israeliana aloha izy ireo voalohany, ary avy eo vao Jiosy. (Lahatsoratra mahafinaritra momba ny maha-Jiosy-Isreliana)
Mazava be ny fahasamihafana ara-pomba fijery eo amin'ny Ortodoksa sy ny Laika mikasika ilay fety eo amin'ny tontolon'ny blaogy Hebreo. Raha toa ny Laika ka manome lanja ny maha zava-dehibe ny fianakaviana , ny fomba amam-panao ary ny sakafo matsiro entin'ny andron'ny Hanukkah ho eo ambony latabany, ny ankilany kosa mirona any amin'ny fahaverezan'ny kolontsaina ao anatin'ny andro moderina misy an'i Israely; ny fahaverezan'ny kolontsain'ny adiny niaraka tamin'ny Tandrefana. Asongadin'izy ireo ny zava-mahatsikaiky amin'ilay fankalazàna ny Hanukkah, izay toa fahatsiarovana ny ady izay sahala tamin'ny andro niadian'ny Israelita tamin'ireo Grika an'arivo taona maro lasa izay mba hiarovany ny kolontsainy.
Ao amin'ny blaoginy , Rabbi Yehuda (Hebreo) no maneho ny fiheverany ny fomba naharesy an'i Israely ankehitriny tamin'ny ady ataony amin'ny fitandrovana ny kolontsaina maoderiny eo anatrehan'ny kolontsaina tandrefana :
Tsy te hamono ny Jiosy ny Grika. Tsy tiany ny hamono ny olona izay noreseny. Zavatra roa ihany no kendreny : Vola avy amin'ireo mponina babony, ary koa ny faneken'ny olona sy fampiharan'izy ireo ny kolontsaina Grika- Hazakaza-tsoavaly, ny tolona, filalaovana ny mozikan-dry zareo
Nino ireo Grika fa ho voasinton'ny lalaony ny Jiosy, ary ho liana amin'ny fandraiszna anjara amin'ny kolontsain'izy ireo ihany koa; ka ho hivadika ho Grika sy handao tsy terena ny Jodaisma..
Indrisy, marina ny an'ireo Grika. Maro ny Israeliana no voasarika tamin'ny kolontsain-dry zareo, manatanteraka ny kolontsain'izy ireo. Satria mibaribary fa mahafinaritra kokoa ny mandeha mijery fampisehoana toy izay hianatra ny Torah. Ary noho izany fihetsika mitady fahafinaretana izany, nafoin'izy ireo ny Torah masina. Ny vahoaka Hashmonean niady ny zon'ny Israelita hanara-dia an'Andriamanitra. Tsapan'izy ireo ny maha zava-dehibe ny tsy fitadiavana fifaliana mandalo fotsiny ihany, fa ny fandraisana anjara aminà hetsika manandanja kokoa (…fianarana ny Torah).
Raha te-handalina misimisy kokoa mikasika ny tantaran'ny Hanukkah, tsidiho ito